Koodhku wuxuu muujinayaa imaatinka suurtogalka ah ee Fortnite ee tvOS [La cusbooneysiiyay] | Wararka IPhone
Koodhku wuxuu muujinayaa imaatinka suurtogalka ah ee Fortnite ee tvOS [La cusbooneysiiyay]
La cusbooneysiiyay. Ugu dambeyntii maanta Ciyaaraha Epic waa ay beeniyeen warkan ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee ciyaarta ee tvOS oo caddaynaya in ay tahay tilmaame "taageerada guud ee barnaamijka aan rasmiga ahayn" iyo in tan aan lagu bilaabi doonin xilligan sanduuqa sare ee Apple. Ceeb.
Waxaan aragnay warar xan ah oo ku saabsan imaatinka ciyaarta caanka ah ee Fortnite ee TV-ga Apple in muddo ah, laakiin hadda iyo ka dib markii lagu dhawaaqay daahfurka ciyaarta qaar ka mid ah aaladaha Android (soo bandhigida Galaxy Note 9) waxaan haynaa warka ay bixiso StormLeaks, midka sharxaya taas Fortnite wuxuu leeyahay khad tvOS ah koodhkiisa.
Imaatinkeedu wuxuu noqon karaa mid dhow oo ciyaartu waxay gabi ahaanba ansax u tahay dhamaan barnaamijyada iyo tvOS oo leh kontarool bannaanka ah waxay shaki la’aan noqoneysaa mid raaxo u ah dadka isticmaala Apple TV. Mid ka mid ah waxyaabaha inbadan oo naga mid ahi ay jeclaan lahaayeen ayaa ah Waxay bilaabi doonaan inta lagu gudajiro casharka bisha Sebtember ee soo socota iyadoo tusaale ahaan uu ka muuqdo agaasimaha guud ee Ciyaaraha Epic, oo hadda waa macquul.
tvOS waa mid ka mid ah OS-yada yar ee hadhay si loo helo Fortnite
Runtu waxay tahay in ciyaarta laga heli karo ku dhowaad dhammaan barnaamijyada, iOS, Android, Mac / PC, Xbox One, PlayStation 4 iyo Nintendo Switch, marka haddii laga heli lahaa tvOS wey fiicnaan laheyd. Hoos u dhaca ayaa ah in la ciyaaro ciyaarta waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la helo amar dibadeed, Maaddaama xakamaynta Apple TV aysan ku habboonayn cayaartoyda gabi ahaanba kiiskan tan ugu fiican wuxuu noqon karaa Nimbus Wireless Gaming Controller oo aan ka helno dukaamada Apple qiyaastii 50 euro.
Sidoo kale ma abuureyno rajo badan maadaama ay si fudud tixraac ugu tahay tvOS-ka gudaha ciyaarta, sidaas darteed waa inaad dulqaadataa oo aad sugtaa inaad aragto waxa ugu dambeyn dhacaya. Shaki la'aan imaatinkiisa Apple TV wuxuu noqon karaa ilaha kale ee weyn ee dakhliga ciyaaraha Epic, kuwaas oo runtii ku hantay cinwaankan dhammaan dhufto ee laga heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Koodhku wuxuu muujinayaa imaatinka suurtogalka ah ee Fortnite ee tvOS [La cusbooneysiiyay]
Minecraft: Daabacaadda Waxbarashada ayaa si rasmi ah ugu soo socota iPad-ka